शहिदका भाईले गाउँपालिका प्रमुखलाई लेखे प्रश्‍नै प्रश्‍नले भरिएको चिठी — OnlineDabali
आदरणीय प्रमुख वीरबहादुर केसीज्यू नमस्कार !
तपाईँ सहिद परिवार, म पनि सहिद परिवारको सदस्य । मेरो दाजु कुलबहादुर घर्ती ‘प्रज्वल’ ले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क लडाइँको मोर्चा सम्हाल्दै गर्दा ज्यान गुमाउनु भएको थियो । दाईले आफ्नो जीवन केवल म र मेरो परिवारका लागि गुमाउनु भएन, देश र जन्ताको लागि गुमाउँनु भयो ।
तपाईँकी श्रीमतीले पनि देश र जनताको लागि जीवन अर्पण गर्नुभयो । प्रमुख ज्यु, हामी सहिद परिवारहरुले तिनै देशका निम्ती मरेकाहरुको नाममा अघाउन्जेल ब्याज खान खोज्ने होइन । शहिदको सम्मान आफ्नै परिवारले खोज्ने पनि होइन, सिंगो समाजले प्रदान गर्ने हो । आफ्नो सहिद श्रीमतीको सम्मान तपाईँ आफैले खोज्ने की यो समाजले बुझ्ने ? मैले सहिद भएका मेरा दाइको सम्मान आफै खोज्ने हैन कि यो समाजले बुझ्ने छ ।
मेरो मतलब, हाल रोल्पा जिल्लाको सुकिदह गाउँपालिका केन्द्रको स्थान र नाम फेर्ने कुराले कचिङ्गल उत्पन्न भइरहेको छ । त्यसमा पनि तपाईँले आफ्नो शहिद श्रीमतीको नाममा गाउँपालिकाको नाम फेर्ने कुराले धेरैलाई निन्याउरो बनाएको छ । शहिदको सम्मानका निम्ति उहाँहरुकै नाममा गाउँपालिकाको नाम राख्ने कुरा जायज होला तर उक्त कुराको छिनोफानो जनताले गर्न पाउनुपर्छ, जनताले नै अनुमोदन गर्नुपर्छ । मेरो भन्नु यत्ति हो ।
हो, हजारौं सहिदको बलिदानीले तपाईँको भाषामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आयो तर तपाईँ जनप्रतिनिधिहरुको एकलौटीशैलीले छोटे राजाहरुको नियती पनि गाउँगाउँमा घुस्यो कि भन्ने आवास हुन्छ, प्रमुख ज्यू ! सहिदको सम्मान समाज परिवर्तन गरेर हुने हो, भूगोलको नाम परिवर्तनले हुँदैन । विकाश र सम्बृद्धिले दिने हो । शहिदहरुको नाममा गाउँपालिकाको नाम झुराउँदैमा हुने होइन । खासगरी स्थानीय सत्ता तपाईँ हाम्रो हातमा आएको यो बेला बिकाशका कुरा हुनुपर्ने हो । योजनाका बिषयमा बहस हुनुपर्ने हो तर रोल्पाको सुकिदह गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गराउने बिषयले किन यत्रो कचिङ्गल किन मच्चाई रहनुभएको छ ? प्रमुख ज्यु !
जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरु जन चाहाना अनुरुप चल्नुपर्छ कि आफु खुसि गर्ने ? त्यो देशमा गणतन्त्र आएको छ । नयाँ संविधानले यस्ता कुराको बारेमा जनतालाई अधिकार प्रधान गरेको छ । राणाकालको जस्तो जंगबहादुर शैलीमा रातारात निर्णय हुने जमाना छैन प्रमुखज्यू !
यदि गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम फेर्नु नै थियो भने उक्त सुकिदह गाउँपालिकाका जनताहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर निर्णयमा पुगेको भए के हुन्थेन ? तपाईँको भोटले प्रमुखको पदवी पाएको तपाईँलाई आफु खुसी निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? कि तपाईँहरु सिंहदरबारले खटाएका छोटे राजाहरु हो ? के तपाईसँग यी प्रश्नहरुको जवाफ छ ?
जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु जग्गा धन्दामा लागे भनेर अर्को गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । यो अत्यन्त दुःखद् कुरा हो । २ नम्बर वडाका अध्यक्ष भुपाल दमाइज्यूले सानडाँडाको ४ सय ४६ कित्ता नम्बरको मोहोन सिङ घर्तीकी बिधुवा बुहारीको जग्गा रातारात ७० हजारमा किनी ८ लाखको मासा हालेर आफ्नो नाउमा बनाउने, अनि त्यहि जग्गा गाउँपालिकामा बिक्री गर्ने नियति राम्रो हुँदै होइन । ८ लाख मासा हालेर भुपालले आफ्नो नाममा पास गराएको जग्गा आज पचासौं लाखमा बिक्री हुने भयो ।
त्यसो भए, राज्यको वैधानिक निकायमा बसेर लुट मच्चाउने योजनाहरु तपाईँहरका हातमा छन् र बिधुवा महिलासँग मात्र ७० हजारमा जग्गा किनेर ५०औं लाखमा बिक्री गर्ने तपाईँहरुसँग नयाँनयाँ तरिका छन्। तर, हामी प्रश्न गरिरहन्छौ । आखिर ति बिधुवा महिला केवल ७० हजारमा चित्त बुझाउन बाध्य भइन हाेइन र प्रमुखज्यू ! के यो अत्याचार होइन ?
तपाईँको मातहतका वडा अध्यक्षको जग्गा हात पार्ने खेलमा फेल भएकी तिनै बिधुवा सामु तपाईँले मुख देखाउनु पर्दैन र ? बिधुवा महिलाको घर जग्गा सस्तोमा हात पार्ने धन्दामा लिप्त तपाईँहरुले शहिदको नाम बेच्न मिल्ला र ? आखिर तिनले पनि त श्रीमान गुमाएकी छन् नि होइन ?
ठिक छ, यदि उक्त ठाउमा गाउँपालिका बनाउनु नै थियो भने जग्गा धनिबाटै सिधै जग्गा खरिद गरि गाउँपालिका बनाउन किन सकिन्थ्यो ? बिचारी बिधुवालाई दुई पैसा भए उनका बालबच्चाहरु पढन लेख्न पाउथे । तपाईँसहितका केही व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा सुनियोजित ढंगबाट यस्तो धन्दा चलाइएको कुरा कहिँ कतै लुक्दैन प्रमुखज्यू । यो शहिदको नाममा ठूलो गद्दारी र बदनामी हो । यो भन्दा ठूलो धोका सुकिदहका लागि अरु के हुन् सक्छ र ?
आत्मनिर्णय गर्न पाउने सुकिदहवासीका अधिकारलाई अंकुश लगाएर राज्यका योजनाहरुलाई आफुखुसि डाइभर्ट गर्दै कमाउ धन्दामा लाग्नु अपराधिक कार्य हो । यो सरासर गलत छ । यदि त्यहि ठाउँमा केन्द्र बनाउने हो भने वडा अध्यक्ष भुपाल दमाईले लिएको जग्गा तुरुन्त फिर्ता गर, अनि ति बिधुवा महिलाबाट गाउँपालिकाले चल्तीको मूल्यअनुसार जग्गा खरिद गरि केन्द्र बनाउ, नत्र ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ तपाईँहरु लुटेरा हो ।
सहिदको सम्मान गर्नु नै छ भने सुकिदह गाउँपालिकाभित्र एउटा सहिद पार्क बनाउ । त्यसमा जनताले साथ् दिनेछन् । सुकिदह नाम आफैमा धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको ठाउँ हो यसलाई पर्यटन क्षेत्रका रुपमा केवलकार हालेर बिकाश गरौं र पर्यटन क्षेत्र बनाइ दुनियाँलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउ ।
नत्र तपाईँहरुले सुरु गरिसकेको लुटको धन्दा कसरी फस्टाउछ त्यही उपाय खोज र सुकिदहलाई धुलोमा मिलाउ । तपाईँहरुका हरेक योजनाहरु हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । राज्यबाट आउने हरेक योजनाहरुलाई कमिसन मुखी बनाएर पैसा असुली तिर लगाउँदैहुनुहुन्छ । यसको लेखाजोखा आर्को पत्रमा बिस्तार गरौंला ।
शहिद प्रज्वलको भाई जयप्रकाश घर्ति